सिङ्गो बस्ती नै तरकारी खेतीमा | News Nepal
>>जग्गा सरकारी, दर्ता निजी, मोही वाग्मती खोलो
>>एक वर्ष मै विदेश पढ्न जान्छन् ६३ हजार विद्यार्थी, अट्रेलियामा मात्रै गए ३६ हजार बढी
>>धनगढी विस्फोटमा विप्लवका कार्यकर्ता सिंहको मृत्यु, चार घाइतेको उपचार हुँदै
>>आजको राशिफल : मिथुन मध्यम, सिंह अत्युत्तम
>>विप्लव कार्यकर्ता खाना खान होटल छिरेका बेला प्राविधिक त्रुटीले बम पड्किएयाे
सिङ्गो बस्ती नै तरकारी खेतीमा
भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुवाफाँटामा अधिकांश किसान अन्नबाली छाडेर नगदेबालीका रुपमा तरकारी खेती गर्न थालेका छन् । तरकारीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसान व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेतीमा लागेका हुन् ।
लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेर गाउँ फर्किएका आदिवासी जनजाति समुदायका युवा पनि तरकारी खेती गरेर आयआर्जन गरिरहेका छन् । “यहाँ तरकारी खेतीबाहेक अरु खेती देख्न मुश्किल पर्छ ।”
स्थानीय तरकारी खेती गर्दै आएका किसान हरिराम चौधरीले भन्नुभयो, “अरु खेतीभन्दा यसमा बढी मुनाफा भएर सबै तरकारीमै लागे ।” २०५८ सालमा चार कठ्ठा जमीनबाट तरकारी खेती शुरु गरेका हरिराम चौधरीले अहिले १५ बिगाहा जमीनमा तरकारी खेती गरेका छन् ।
“राम्रो आम्दानीसँगै तरकारी खेतीले जिल्लामै किसानमाझ आफ्नो परिचय बनाइदियो ।” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गाउँमै तरकारी खेतीको लहर चलेको छ ।”
कुनै बेला आर्थिक अवस्थाले समस्या रहेको बताउँदै चौधरीले तरकारी खेतीबाट कमाइले धेरै सम्पति जोडेको बताउनुभयो ।
“शुरुमा त धेरै समस्या थियो, जब मैले तरकारी खेती शुरु गरे राम्रो आम्दानी भएपछि खेती विस्तार गर्दै गए मेहनत गरे अहिले रामै्र छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “तरकारीले नै पाँच पटक सम्मान थाप्ने अवसर समेत पाए ।”
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, युवा स्वरोजगार र राष्ट्रपति पुरस्कारबाट समेत सम्मानित भएका चौधरीले तरकारीकै आम्दानीबाट कैलालीको अत्तरियामा जमीन खरीद गरेर घर बनाएका छन् । “तरकारीको कमाइले ट्र्याक्टर, अत्तरियामा घर बनाउनुका साथै एक बिगाहा जमीन जोडे ।” उहाँले भन्नुभयो, “मिहेनत गरे विदेशिनु पर्दैन ।” उहाँले तरकारी खेतीबाट वार्षिक रु १२ देखि १३ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै बालुवाफाँटाका टेकबहादुर चौधरी पनि तरकारी खेतीमै व्यस्त छन् । दुई वर्ष कतारमा मजदूरी गरेर घर आएको चौधरीले अहिले १५ कठ्ठा जमीनमा तरकारी लगाएका छन् । “वैदेशिक रोजगार मन नपरेपछि यहाँ आएर एक कठ्ठाबाट तरकारी खेती थालेको थिए ।” उहाँले भन्नुभयो, “खेती फष्टाउन थालेपछि बढाउँदै लगेको छु ।”
उहाँले तरकारी खपतका लागि बजारको समस्या नरहेको बताउनुभयो । “तरकारी लिन जिप गाउँमै आइपुग्छन् ।” उहाँले भन्नुभयो, “गाडी नआएको दिन मोटरसाइकलमा भए पनि तरकारी बजार पु¥याउँछु ।”
कृष्णपुर नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष नत्थुराम चौधरीले गाउँमा ५० प्रतिशत किसान तरकारी खेतीमा लागेको बताउनुभयो । “पहिले त धान गहुँमै जोड थियो ।” वडाध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “अहिले तरकारी खेती उचाइमा पुगेको छ ।” उहाँले किसानको प्रोत्साहनका लागि सरकार र स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस
प्रकाशित मिति : 2018-11-07
कलिलो उमेरमै हस्पिलाटी क्षेत्रमा जम्दै राजिव श्रेष्ठ, यस्ता छन् उनका विजनेस प्लान
काठमाडाैं । दरबारमार्गमा व्यापार व्यवसाय गर्नु सामान्य मान्छेका लागि चुनाैतिको विषय हो । नेपालको अत्यन्तै महंगो स्थानको रुपमा परिचित ठाँउ...
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला...
बिग मर्जर: ग्लोबल र जनता बैंक मर्जरमा जाने, दुई अध्यक्षले गरे सहमती पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम ठूला बैंकहरुको मर्जर शुरु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो होटल सांग्रिलामा जनता बैंकका...
१२ हजारले एपीएस पास गरे पनि कोरियाले साढे सात हजार कामदार मात्रै लैजाने
काठमाडौं । पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारका लागि आकर्षक श्रम गन्तब्यको रुपमा रहदै आएको च । तर, यसपटक कोरियाले...
बोधिचित्त बोटमै ८१ लाख मूल्य, फेदमा विवाद
काठमाडाैं । बोधिचित्तको कारोबार शुरू हुँदै गर्दा हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि एउटै रूखलाई पटक–पटक फरक–फरक व्यक्तिका नाममा बिक्री गरी...
विचारको अस्पठतामा कम्युनिष्ट सरकारले पञ्चायतकालीन आयातमुखी बजेट ल्यायोः डा. बाबुराम भट्टराई
काठमाडाैं । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पञ्चायतकालीन अर्थतन्त्र अंगाल्दा नेपालमा विकास हुन नसकेको दावी गरेका...
नेपालमा अब पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउने
काठमाडाैं । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काम सकिएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का...
सातवटै प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौं । मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार सातवटै प्रदेशका...
८४ हजार बढिले दिए कोरियन भाषा परिक्षा, यस्तो छ नतिजा सार्वजनिक हुने तालिका
काठमाडौं । रोजगार अमुमति प्रणाली (इपिएस) कोरियन भाषा परिक्षामा ८४ हजार २ सय १५ जना सहभागी भएका छन् । ९२...
एसिसी यू–१९ इस्टर्न रिजन: हङकङलाई हराउँदै नेपाल यू–१९ एसिया कपमा छनाैट
विना पूर्वाधार विदेशीको नक्कल गर्न खोज्दा सरकार अलोकप्रिय बन्दै गयोः नेता नेपाल
मुलुक विकासको पहिलो आधार ग्रामीण विकास
पृथ्वी जयन्ती र हाम्रा नेताका सोचाइ
कथा : नमिठो यात्रा
प्रचण्ड र छोरा प्रकाशबिच फोनमा अन्तिम पटक यस्तो कुरा भएको थियो
पीएचडी गर्न जर्मनी गएका आत्मारामले फेसबुकमा ‘मनपरी’ लेख्दा नेपाल झिकाईदै
Prabesh Karki (Makalu)